सुरुमा मेरै सरले गरे… पछि अर्का सरलाई पनि ल्याउन थाले ! – PathivaraOnline
Home > रोचक > सुरुमा मेरै सरले गरे… पछि अर्का सरलाई पनि ल्याउन थाले !
admin September 8, 2020 September 8, 2020 रोचक, समाज	0
बैतडी । गत मंसिरको कुरा हो । त्यो दिन आमा घास लिन जानुभएको थियो। बा काम गर्न स्वर (पिथौरागढ,भारत) गएका थिए । भर्खरै मन्दिरबाट फर्केर घरमा एक्लै बसिरहेको बेला खडक सर आए । जसले मलाई एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म पढाएका थिए । मैले तल्लो घरमा जाने तयारी गर्दैगर्दा उनले मलाई च्या’प्प समते । वरपर कोही मानिस थिएनन् । मेरो मुख बन्द गरेर उनले लुगा फु’का’ल्न थाले । म केही बोल्न सकिन् ।
अप्रत्यासित रुपमा यसो भइरहँदा जोर जोरले चि’च्या’उन खोजेकी थिए । तर मुख बन्द थियो । आवाज नै निस्केन् । ज’ब’र’ज’स्ती गरेर उनि फर्किए । म एकछिन बे’हो’स’जस्तै भए । उठ्नै सकिन । निकै पी’डा भइरहेको थियो । साँझ आमा घरमा आउनुभयो तर दिउँसोको कुरा भन्ने आँट नै आएन् । म चुपचाप बसे । त्यसपछि खडक सरले अर्का राम सरलाई त्यो कुरा भनेछन् । अर्को त्यस्तै हर्कत राम सरले गरे । यि दुई जनाले म माथि ज’ब’र’जस्ती गरे ।
कुनै दिन खडक, कुनै दिन राम विद्यालयबाट फर्किदा सँगै सँगै आउथे र मौका मिल्ने बित्तिकै क’र’णी गर्थे । गाउँमा पनि यी दुई जना मुख्खेराठ हुन् । मुख्खे भनेका उसैपनि गाउँमा ठूला मान्छे भनेर चिनिन्छन् । म माथि अन्याय भइरहेको छ भन्ने त थाहा थियो । तर कसैलाई भन्न सकेकि थिइन् । कसैले थाहा पाए भने आफ्नै इज्जत जान्छ भन्ने डर थियो । राम र खडकले पनि कसैले भन्यो भने बदनाम गरिदिन्छौ भन्थे । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको बिरुद्ध बोल्ने हिम्मत कहिल्यै आएन् ।
गाउँका सबैजनाले जस्को बच्चा हो उसैले जिम्मा लिनुपर्ने कुरा गर्दैछन् । वडा र गाउँपालिका मान्छेहरुले ‘यतै’ मिलाउने भन्दै कहि नजान् भनेका छन । माइती पट्टीका एक दुई जना दाइहरुले प्रहरीमा जान सल्लाह दिएका थिए । मलाई पनि त्यही ठिक लागेको थियो । तर गाउँका जान्नेसुन्ने तथा वडा र गाउँपालिकाका सबै मान्छेले मिलाउँछौ भनेका छन् । जसले जे भनेपनि म माथि ज’ब’र’जस्ती गरेर यो अवस्थामा पुयाउनेहरुलाई सजाय होस भन्ने चाहना त छ ।